Castle Lager Sponsors Zim Fans to Russia World Cup » 263Chat
By Munashe Chokodza	 On Apr 12, 2018
10 lucky football fans in Zimbabwe will have a rare opportunity to watch the 2018 FIFA World Cup in Moscow, Russia thanks to the Delta Beverages sponsorship.
The sponsorship running through the Castle Lager brand has also roped in former Warriors midfielder, Tinashe Nengomasha who is the Zimbabwe Ambassador with former Barcelona and Cameroon legend Samuel Eto’o standing in for the rest of Africa.
In statement released today, Delta said they will sponsor 10 Zimbabwean soccer fans to watch the FIFA World cup finals in Russia while also promoting community based football through a 5 aside tournament that will culminate in a final team of emerging Zimbabwe champions which will compete with other African teams.
“In the second category, excitingly, for those inclined towards playing football, we are rolling out a nation-wide series of community based 5-aside games that will operate on a knock-out basis, culminating into a final team emerging as Zimbabwe champions.
“The local Zimbabwe champions will then play against representatives of other African countries in Lusaka between the 24th and 26th of May and if our local champions win that match, they will be on an all expenses trip to Russia for the world cup,” said Delta Beverages
“It’s very hard to describe the experience of being in packed stadium during a high-profile match. I am excited that fellow Zimbabweans will be getting these same experiences I have also had as a professional, if we win the 5 aside challenge on a continental level. I appreciate Castle Lager for putting together this program and am happy to be the local Castle Lager 5-Aside ambassador,” said Tinashe Nengomasha on the side-lines of the launch.
Castle Lager have acquired the exclusive rights to be the official beer of the FIFA World Cup for Zimbabwe, with the brand pledging to ensure that many Zimbabweans can have a more personal experience of the word cup through this association.
Castle Lager Premier Soccer LeagueDelta BeveragesE'toTinashe Nengomasha